> Resource > Video > Sida loo Play WMA kasta oo ku iPhone Si fudud
iPhone waa qalab weyn oo la qaadan karo u ciyaaro music, oo ay taageerto wax badan oo ka mid ah noocyada file maqal ah. Laakiin ma xamili karaan faylasha Windows Media Audio (WMA) sida qaab WMA ah waxaa iska leh xafiiltamaan ugu weyn ee Apple ayaa, Microsoft. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari WMA on iPhone, aad leedahay si ay u isticmaalaan qalab xirfadeed si loogu badalo WMA si iPhone qaabab socon. Si kastaba ha ahaatee, inta badan files WMA waa laga badbaadin karaa iyadoo la DRM. Dhammaan qalabka free diinta sida Lugood ee suuqa ku guuldareysato inay ka badalo WMA DRM-ilaaliyo in iPhone. Sidaas, waxaad bettter isticmaali lahaa aalad awood si loogu badalo file WMA kasta oo loo maqli siman on iPhone.
Wondershare Video Converter waxaa loo isticmaali karaa sida ciyaaryahan weyn WMA u iPhone. Waxay kaa caawin kartaa inaad si fudud oo dhaqso beddelid labada qaabab DRM-free iyo DRM-ilaaliyo files WMA si iPhone taageeray. Taasi macnaheedu waa in aad dareemi kartaa lacag la'aan ah inay ku raaxaystaan ​​wax WMA music digital aad iPhone iyadoo la kaashanayo this WMA weyn in Converter iPhone.
Haddii aad isticmaasho Mac ah, waxa kale oo aad isticmaali kartaa version Mac weyn ee app this - Video Converter u Mac in ay sameeyaan shaqo this. Waxaa si deg deg ah u shaqeeyo, si fudud, oo si xoog leh. Laakiin ogow in version MAC badalo karo files WMA galmo oo kaliya in ay iPhone.
Tutorial soo socda aad ku tusi doonaa sida loo ciyaaro WMA wax ku iPhone on boosteejo Windows. Laakiin howlgalka on Mac waa ku dhowaad isku mid ah.
1 WMA Load in WMA si Converter iPhone
Tani WMA si iPhone video Converter taageertaa jiitaa-iyo-dhibic. Waxaa loola jeedaa in aad si toos ah jiidi kartaa files WMA maxalliga ah si ay leeg- tahay diinta this app ee. Ka dib markii in, waxaad arki kartaa dhammaan faylasha WMA ku daray in la soo bandhigi doonaa sida soo socota. App Tani waxay sidoo kale ku siinaysaa siyaabo kale oo ay soo dhoofsadaan files WMA aad. Ama waxaad riixi kartaa batoonka Add Faylal ay si ku shuban files WMA.
2 Dooro MP3 ama iPhone sida qaab wax soo saarka
Si aad u ciyaaro WMA files audio on iPhone, waxaad u baahan tahay in ay doortaan iPhone qaab socon sida qaab wax soo saarka. Sida aan ognahay, MP3 lagu ciyaari karo qalabka ugu, oo ay ku jiraan iPhone. Halkan, waxaad dooran kartaa MP3. Waxa laga reebo, waxa jira ikhtiyaar kale oo aad dooran kartaa sida qaab wax soo saarka. Taasi qaabka filaayo in iPhone.
Marka hore, ka dhacay image qaabka on Murayaad Qaabka wax soo saarka. Markaas, ee wax soo saarka liiska qaab this app ee, waxaad tagi kartaa Qaabka> Audio> MP3 ama tag Device> Apple> iPhone (waxaan ula jeedaa model saxda ah iPhone aad leedahay).
3 Beddelaan WMA si iPhone
No arrinta nooca WMA gudbiyo aad dajiyaan si loogu badalo, DRM ama Non-DRM WMA files, app iyaga badali si iPhone taageeray files iyo saarto ilaalinta DRM isku mar haddii kuwa ka jira.
Si aad u samayn, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhacay button badalo ee koonaha midig ee suuqa kala barnaamijkan ayaa hadda. Markaas, taas WMA weyn in Converter iPhone samayn doona waxyaalahaas oo nasasho kuu toos ah. Oo wax ugu dambeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay helaan files gediyay ay si toos ah garaacid badhanka Open Folder qaab beddelidda kadib, ka dibna iyaga lagu wareejiyo si aad iPhone Raaxo via u hagaagsan itune. By jidkii, hawlaha qaab beddelidda waa si dhakhso ah, oo kaliya dhowr daqiiqo.